Abavelisi beSemi-Blackout kunye nababoneleli-i-China Semi-Blackout Factory
Ixabiso eliphantsi iQwarha Liyimfamekisa Ilaphu elinoMbala ongenanto
Ilaphu leZebra Iimfama
Ilaphu le-Zebra blinds likwabizwa ngokuba lilaphu le-sheer blinds, ilaphu le-rainbow blinds, ilaphu elimnyama le-roller blinds, kunye nelaphu elimfamathekileyo elinamaleko amabini okanye ilaphu le-roller eliziimfama, elasuka eMzantsi Korea kwaye likwadume kakhulu kumazwe ngamazwe. Luhlobo lwelaphu aludibanisi kuphela izibonelelo zelaphu kunye ne-mesh, kodwa ludibanisa imisebenzi yeemfama ze-venetian, i-roller blinds kunye ne-Roman blinds.Isetyenziswa ngokubanzi kumakhaya, iihotele, iindawo zokutyela, iivillas, izakhiwo zeofisi eziphezulu kunye nezinye. iindawo.
Xa kuthelekiswa nelaphu leqwarhashe elimfamekisayo kwimarike, imbonakalo yelaphu leQela leqwarha elimfamekisayo lingcono kakhulu, kwaye ukusebenza kulula ngakumbi.
Ilaphu eliyimfama leZebra
Iimfama zeZebra, ezikwabizwa ngokuba zii-rainbow blinds, dimming blinds, blind-layer roller blinds, imini nobusuku, njl.njl., zavela eMzantsi Korea kwaye zikwadume kakhulu kumazwe ngamazwe. Ububanzi be-zebra window roller blinds fabric 3m, kwaye izinto eziphathekayo ziyi-100% i-polyester.
3. Sebenzisa ilaphu elithambileyo okanye isiponji esimanziswe ngamanzi ashushu ukosula ikhethini ngexesha lokususa uthuli / ukuvala inzala. Ukuba kuyimfuneko, iisepha ezithambileyo zingongezwa. Sula ngobunono ukuthintela ukushwabana okanye ukonakalisa ilaphu. Ukosula kunokwenza umkhusane ucoceke.
4. Sebenzisa iayini yomphunga ukutshiza kwindawo emalunga ne-10 cm kude nomkhusane welaphu, onokuthi ube nefuthe lokususa uthuli / ukuvala inzala.
China Factory Supply Zebra Blinds Ilaphu ngexabiso Competitive
Ilaphu elimfamekisayo leZebra likwabizwa ngokuba lilaphu elimfamekisayo, ilaphu elimnyama elimnyama, ilaphu lokumfamekisa elimnyama, kunye nelaphu elimfamekisayo elinamaleko aphindwe kabini. Luhlobo lwelaphu elilukiweyo elisuka kwilaphu elincinane elinobubanzi obufanayo kunye nomnatha oqeleleneyo omnye komnye.
Xa kuthelekiswa nelaphu leqwarha elimfamekisayo kwimarike, ukukhanya okuhlengahlengiswayo kuyinzuzo enkulu yeGroupeve Zebra Blinds Fabric, enokwanelisa iimfuno zeemeko ezahlukeneyo zokukhanya, kwangaxeshanye, imbonakalo nayo ilungile, kwaye ukusebenza kulula.
Imini nobusuku iLayibhile eZibini iiShayina zeLaphu ekhaya
Ilaphu le-Sheer Shades
I-Sheer shades, ekwabizwa ngokuba zii-zebra blinds, dimming blinds, ii-roller blinds eziphindwe kabini, iimfama zasemini nasebusuku, iimfama zobumnyama, njl.njl., zisuka eMzantsi Korea kwaye zikwadume kakhulu kumazwe ngamazwe. Isetyenziswa ngokubanzi kumakhaya, iihotele, iivenkile zokutyela, iivillas, izakhiwo zeofisi eziphezulu kunye nezinye iindawo.
Isimbo saseYurophu i-Rainbow Blinds Fabric 100% Polyester
Ilaphu leRainbow Blinds
Iimfama zeRainbow, ezikwabizwa ngokuba zii-zebra blinds, dimming blinds, blind-leyer roller blinds, imini nobusuku, njl.njl., zisuka eMzantsi Korea kwaye zikwadume kakhulu kumazwe ngamazwe.
Njengoko sonke sisazi, umphumo we-shading we-rainbow blinds fabrics igxininiswe ngokukodwa kwizinto eziphathekayo. Ngokweempawu zelaphu, linokohlulwa libe yilaphu elimnyama elimnyama elimnyama kunye nelaphu elimnyama elimnyama.
Ukukhethwa kwefuthe le-shading kunqunywe ngokukodwa ngokwendawo esetyenzisiweyo. Kungakhathaliseki ukuba loluphi uhlobo olufunayo, sinokunika iingcebiso ezifanelekileyo kunye neesampuli.
IFactory Hot Thengisa iDual Sheer Roller Blinds Fabric For Office
Ilaphu le-Sheer Roller Blinds
I-Sheer roller blinds, ekwaziwa ngokuba zii-zebra blinds, dimming blinds, ii-double-layer roller blinds, imini nobusuku, iimfama zobumnyama njl.njl., zisuka eMzantsi Korea kwaye zikwadume kakhulu kumazwe ngamazwe. Izinto eziphathekayo ze-sheer roller blinds fabrics yi-100% ye-polyester.
Ayinakufezekisa kuphela umphumo we-shading, kodwa iphinda ihlangabezane neemfuno zokukhanyisa xa abantu besebenza. Isetyenziswa ngokubanzi kumakhaya, iihotele, iindawo zokutyela, iivillas, izakhiwo zeofisi eziphezulu kunye nezinye iindawo.Sinezinto ezingaphezu kwama-200 kwincwadana yethu yesampula yelaphu ye-roller blinds, unokufumana imibala yakho efanelekileyo kuyo.
Umgangatho ophezulu weMini kunye noBusuku obuMfaphazi beFabric 100% Polyester
Ilaphu elimfamekisayo leMini nobusuku
Ilaphu elimfamekisayo emini nasebusuku likwabizwa ngokuba lilaphu le-zebra blinds, ilaphu elimfamekisayo, ilaphu elimnyama elimnyama, ilaphu le-roller elimfiliba, kunye nelaphu elimfamathekileyo eline-roller eliphindwe kabini okanye ilaphu elimfamathelisa kabini.
Iimfama zemini nobusuku ziyi-double-layer blinds. I-dimming yayo iphunyezwa ngokudibanisa kwendwangu yengubo kunye ne-mesh layer. Xa i-mesh layers idibana, ukukhanya kuyathambile kwaye ukukhanya okuthe ngqo kuyancitshiswa ukuya kwinqanaba elithile. Xa iileya zelaphu ziwelana, ukukhanya kuvaliwe ngokupheleleyo, ukuze ekugqibeleni kuthintele ukukhanya. Yonke imini nobusuku ilaphu elimfamekisayo lenziwe nge-100% i-polyester, kwaye sinezatifikethi zazo zonke iilaphu.
Ukusetyenziswa okuphezulu kweZebra Shade Fabric 100% Polyester
Ilaphu loMthunzi weZebra likwabizwa ngokuba lilaphu elimfamekisayo, ilaphu elimnyama elimnyama, ilaphu le-roller elimfilibayo, kunye nelaphu elimfamathekileyo eline-roller eliphindwe kabini. Ngokweempawu zelaphu, linokohlulwa libe lilaphu leqwarha elimnyama elimnyama kunye nelaphu leqwarha elimnyama.
Isetyenziswa ngokubanzi kumakhaya, iihotele, iivenkile zokutyela, iivillas, izakhiwo zeofisi eziphezulu kunye nezinye iindawo. Kwindawo evulekileyo efana negumbi lokuhlala kunye negumbi lokufunda, ukuba iimfuno ze-shading azikho phezulu kakhulu, unokukhetha i-zebra blinds ye-semi-blackout. Ukuba ligumbi lokulala okanye igumbi le-audio-visual elifuna i-shading ephezulu, ungakhetha i-zebra blinds emnyama.
Inemvakalelo eyomeleleyo ye-dimensional emithathu kwaye ishushu kakhulu. Xa iimfama zivuliwe, unokujonga indawo yangaphandle kwaye ukukhanya okungena kwigumbi kuthambile kwaye kukhululekile.
Xa ikhethini ivaliwe, ihluke ngokupheleleyo ngaphandle, iqinisekisa ubumfihlo kunye nokubonisa ukulula kunye nobuhle be-rainbow blinds.
Ilaphu lethu le-rainbow blinds lolona khetho lufanelekileyo kwiifektri ze-rainbow blinds okanye abathengisi. Singanikezela ngeesampulu zasimahla zelaphu le-rainbow blinds kubathengi bethu. Kwaye umqulu ngamnye welaphu le-rainbow blinds kufuneka uphumelele uvavanyo lomgangatho ngaphambi kokuthunyelwa.
Ilaphu leZebra likwabizwa ngokuba lilaphu elimfamekisayo, ilaphu elimnyama elimnyama, ilaphu le-roller elimfiliba, kunye nelaphu elimfamekisayo elinamaleko amabini. Ngokweempawu zelaphu, linokohlulwa libe lilaphu leqwarha elimnyama elimnyama kunye nelaphu leqwarha elimnyama.
Kwindawo evulekileyo efana negumbi lokuhlala kunye negumbi lokufunda, ukuba iimfuno ze-shading azikho phezulu kakhulu, unokukhetha i-zebra blinds ye-semi-blackout. Ayinakufezekisa kuphela umphumo we-shading, kodwa iphinda ihlangabezane neemfuno zokukhanyisa xa abantu besebenza. Ukuba ligumbi lokulala okanye igumbi le-audio-visual elifuna i-shading ephezulu, ungakhetha i-zebra blinds emnyama. Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi enye okhetha ukuyikhetha, sinokunika iingcebiso ezifanelekileyo kunye neesampuli.
Isimbo esitsha seRainbow Blinds Fabric Semi-Blackout
Iimfama zeRainbow, ezikwabizwa ngokuba zii-zebra blinds, dimming blinds, blind-leyer roller blinds, imini nobusuku, njl.njl., zisuka eMzantsi Korea kwaye zikwadume kakhulu kumazwe ngamazwe. Luhlobo lwelaphu elilukiweyo elisuka kwilaphu elincinane elinobubanzi obufanayo kunye nomnatha oqeleleneyo omnye komnye. Inemvakalelo eyomeleleyo ye-dimensional emithathu kwaye ishushu kakhulu. Izinto eziphathekayo zelaphu le-rainbow blinds yi-100% ye-polyester.
Xa kuthelekiswa nobuninzi belaphu le-rainbow blinds kwimarike, ukukhanya okuhlengahlengiswayo kuyinzuzo enkulu ye-Groeve Zebra Blinds Fabric, enokuthi ihlangabezane neemfuno zeemeko ezahlukeneyo zokukhanya, kwangaxeshanye, imbonakalo nayo ilungile, kwaye ukusebenza kulula.
Isiqiniseko soMgangatho Ilaphu leZebra eliZinzileyo 100% yePolyester Semi-Blackout
Ilaphu elimfamekisayo leZebra likwabizwa ngokuba lilaphu elimfamekisayo, ilaphu elimnyama elimnyama, ilaphu le-roller elimfiliba, kunye nelaphu elimfamekisayo eline-roller eliphindwe kabini. Ngokweempawu zelaphu, linokohlulwa libe lilaphu leqwarha elimnyama elimnyama kunye nelaphu leqwarha elimnyama.
Ayidibanisi kuphela iingenelo zengubo kunye ne-mesh, kodwa idibanisa imisebenzi ye-venetian blinds, i-roller blinds kunye ne-Roman blinds. Isetyenziswa ngokubanzi kumakhaya, iihotele, iivenkile zokutyela, iivillas, izakhiwo zeofisi eziphezulu kunye nezinye iindawo.